Ninkeyga wuxuu igu qasbaa xiliga galmada wax yaabo kale oo xaaraan ah ee maxaan sameeyaa? | Gaaloos.com
Home » galmada » Ninkeyga wuxuu igu qasbaa xiliga galmada wax yaabo kale oo xaaraan ah ee maxaan sameeyaa?
Gacan furnaan:gabadhu marka ay ninkeeda isku halaynayso waxyaalaha ugu horeeya ee ay fiirinayso waa sida wanaagsan ee uu u hurayo waxyaalaha keenaya in gurigu uu u ekaado mid laga fekerayo iyo mid loo quuurayo waxyaalaha dhisaya bilicdiisa iyo degenaantiisa. Maamulid:maamulida murugada, dhibaatooyinka, iyo ismaandhaafku waa xirfad looga baahanyahay qof walba oo doonaya inuu farxada gurigiisu noqoto mid dhamaystiran.
Title: Ninkeyga wuxuu igu qasbaa xiliga galmada wax yaabo kale oo xaaraan ah ee maxaan sameeyaa?